Amanye amabali aqaqambileyo kaJorge Luis Borges (II) | Uncwadi lwangoku
Inxalenye yesibini yokuphononongwa kwamabali ombhali waseArgentina JU-Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo. Ukufunda icandelo lokuqala cofa apha. Ezi ndibonisa namhlanje zivela kwincwadi yakhe Iintsomi (1944): amabali amabini avela kwinxalenye yokuqala, Umyezo weendlela se ifolokhwe, kunye neyesibini, Ubugcisa.
1 Ithala leencwadi laseBhabheli
2 Igadi yeeNdlela zokuFunela
3 Iyonwabisa into engalibalekiyo
Ithala leencwadi laseBhabheli
Ndibhale nje into engenasiphelo. Andisichazanga esisichazi ngaphandle kwesiko lokuthetha rhetorical; Nditsho ukuba akukho ngqiqweni ukucinga ukuba umhlaba awunasiphelo. Abo bayigwebayo banomda wokuba kwiindawo ezikude iipaseji kunye nezinyuko kunye neehexagon zinokuphela ngokungathandabuzekiyo-nto leyo engenangqondo. Abo bacinga ngaphandle kwemida, bayalibala ukuba inani elinokubakho leencwadi linazo. Ndizimisele ukucebisa ngesi sisombululo kwingxaki yakudala: Ithala leencwadi alinamkhawulo kwaye linamaxesha ngamaxesha. Ukuba umhambi ongunaphakade angayiwela nakweyiphi na indlela, uya kuqinisekisa emva kweenkulungwane ukuba loo miqulu iphindaphindwayo kwisiphazamiso esinye (esiphindayo, iya kuba ngumyalelo: uMyalelo). Ubulolo bam buyavuya ngeli themba limnandi.
Ibali lokuqala lisixelela ngalo iphela, de ubunjani bukaThixo, ze Azar. Ikwenza njalo nge Isikweko: leyo ye ithala leencwadi, isakhiwo esikhulu segalari ezi-hexagonal kunye ezifanayo, ezimele ubunyani, okanye i-cosmos. Kuyo, imiqulu efanayo, emva kwayo yonke into eyaziyo ukuba iminyaka okanye amawaka eminyaka, baziphinda-phinda amaxesha amaninzi. Yiyo loo nto ibali lidlala ngothando lweNietzschean ukubuya okungunaphakade okufanayo.
Igadi yeeNdlela zokuFunela
Igadi yeeNdlela zokuFunela awuzalisekanga, kodwa ayingobuxoki, umfanekiso wendalo iphela njengoko uTsui Pên wakhawulayo. Ngokungafaniyo noNewton noSchopenhauer, ukhokho wakhe wayengakholelwa kumfaniswano, ixesha eligqibeleleyo. Wayekholelwa kuthotho lwamaxesha angenasiphelo, kuthungelwano olukhulayo nolunezidibanisi zamaxesha ahlukeneyo, aguqulayo nafanayo. Le webhu yamaxesha asondela, ayaphambuka, adibanise okanye angahoywa kangangeenkulungwane, kubandakanya onke amathuba. Asikho kumaxesha amaninzi; kwezinye ukhona hayi mna; kwabanye ndithi, asinguwe; kwabanye, zombini. Kule nto, apho ithuba elilungileyo eligcinele mna, ufikile endlwini yam; kwelinye, xa uwele umyezo, wandifumana ndifile; kwelinye, nditsho la magama, kodwa ndiyimpazamo, sisiporho.
"Kuzo zonke," ndacacisa, hayi ngaphandle kokungcangcazela, "ndiyabulela kwaye ndihlonipha ukuzonwabisa kwakho kwegadi yaseTs'ui Pên."
"Hayi," wambombozela encumile. Ixesha elingenasiphelo leefolokhwe kwikamva elingenakubalwa. Kwenye yazo ndilutshaba lwabo.
Igadi yeeNdlela zokuFunela Elinye lawona mabali anomdla, adumileyo kunye nawokukhuthaza ombhali waseArgentina. A isikweko sexesha (ngendlela efanayo ne Ithala leencwadi laseBhabheli isuka emajukujukwini) nge a inoveli yamabali amaTshayina. Kuzo zonke izinto ezinokwenzeka kunye nexesha elizayo ziyafaneleka, kwihlabathi elingenasiphelo kunye nezinye izinto eziyinyani. Kwangelo xesha, iyaprofeta ngokubonakala kwale mihla Incwadi yemidlalo y Iinoveli ezibonakalayo, apho umfundi / umdlali kufuneka enze ukhetho olunempembelelo kumxholo webali, kuba ukukhula kwawo akukho mgca, kwaye awuzange umiselwe kwangaphambili.
Iyonwabisa into engalibalekiyo
Waphinda wawahlaziya onke amaphupha, onke amaphupha. Izihlandlo ezibini okanye ezithathu wakha kwakhona imini yonke; akazange akhe athandabuze, kodwa ulwakhiwo ngalunye lwalufuna usuku lonke. Undixelele: "Ndineenkumbulo ezininzi ndedwa kunabo bonke abantu ababenabo ukusukela oko umhlaba waba lihlabathi." Kananjalo: "Amaphupha am afana nomlindelo wakho."
Inyani yile yokuba siphila sihlehlisa yonke into enokuhlehliswa; Mhlawumbi sonke siyazi ngokunzulu ukuba asinakufa kwaye kungekudala okanye kamva, wonke umntu uya kwenza zonke izinto kwaye uyazi yonke into.
Umlinganiswa ophambili webali lethu lokugqibela uqalekisiwe, kwaye kwangaxeshanye usikelelwe, kunye Isifo sesifo ("Isifo sesilumko"), ekubonakaliswe kuso imeko yakhe enobuntu (mhlawumbi obuvela kuThixo) Isakhono sokukhumbula zonke iinkcukacha zokugqibela ngobukho bazo. Lonke igqabi emithini alibonileyo, lonke uboya kumashiya abo bonke abantu adibene nabo. Amandla akhe angaphaya koko UFunes unyanzelekile ukuba ahlale imini nobusuku kwigumbi elimnyama, Ukuphepha ukukhuthaza okungaphandle okukhusela ekuphumleni kwengqondo yakho ediniweyo. Njengecebo lokugqibela, Iyonwabisa into engalibalekiyo yintlekele: leyomntu engakwaziyo ukusebenzisa amandla akhe angaphaya kwawomntu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Amabali » Amanye amabali aqaqambileyo kaJorge Luis Borges (II)